कोरोनाको प्रकोपका बीच स्क्रबटाइफस र डेङ्गुका बिरामी वढे – च्यालेन्ज नेपाल
कोरोना भाइरसबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित जिल्लामध्येको चितवनमा स्क्रबटाइफस र डेङ्गुका बिरामी समेत बढ्दै गएका छन् । भरतपुर अस्पतालमा दुई महिनामा ६९ जनालाई स्क्रबटाइफस र २४ जनालाई डेङ्गु देखिएको छ ।
जिल्लाका शहरी क्षेत्रमा अहिले पानी भरिएको छ । त्यसले रोग थप बढ्न सक्ने भरतपुर अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष समेत रहनु भएका डा. भोजराज अधिकारीले वताए । उनका अनुसार पानी सुक्दै जाँदा रोगको प्रकोप वढ्दै जाने खतरा छ । जिल्लामा हरेक वर्ष यतिवेला दुबै रोगका बिरामी वढ्ने गर्दछन् ।
srot dainik online
this video most important for you…
Tags: #challengenepal #challengeonlinetv #latest news latest news update
Previous लगातार टाउको दुख्यो ? यस्तो हुन सक्छ समस्या र समाधानका उपाय
Next यस्ता छन अमृत सम्मान मुलाका फाइदाहरु हेर्नुहोस…